Big E dia nianatra zavatra betsaka tamin'i John Cena tao amin'ny WWE - Wwe
'Nanampy tamin'ny fananganana ny asako izany' - Top WWE SmackDown kintana dia mahatadidy fotoana tsy hay hadinoina niaraka tamin'i John Cena
Big E vao haingana no nahatsiaro ny fotoana nanombohany ny laharam-pahamehan'ny WWE ary namelabelatra an'i John Cena tamin'ny fizarana RAW tamin'ny 2012. Nanazava izy fa ny fiasana amin'ny anarana lehibe toa an'i John Cena, Dolph Ziggler ary AJ Lee isan-kerinandro dia nanampy azy betsaka ny asany amin'ny tolona.
Talohan'ny laharam-boninahiny voalohany, Big E dia efa nanao anarana ho azy tao amin'ny NXT izay izy no Tompondakan'ny NXT faharoa. Niseho tamin'ny WWE RAW izy raha mbola Tompondakan'ny NXT ary nahavita marika tsara tamin'ny laharam-boninahiny tamin'ny famonoana ny tavan'ny orinasa.
Miresaka amin'ny Hindustan Times , Big E dia niresaka ny zavatra niainany niasa tamin'ny sasany amin'ireo anarana tsara indrindra tamin'ny tolona tamin'izany fotoana izany sy ny fiantraikan'izany tamin'ny asany WWE:
'Io no iray tamin'ireo zavatra niainana tsara indrindra nianarako tamin'izany.' hoy i Big E. 'Ny alin'ny Slammy izay laharam-pahamehako dia nanidy ny fandaharana aho namela an'i John Cena nametraka. Ary, zavatra tsy dia ataoko maivana izany. Nanampy tamin'ny fananganana ny asako izany, nanampy ahy tamin'ny fampiorenana ahy. Fotoam-pianarana nahafinaritra tokoa izany. Teo aho, isaky ny alina isaky ny hetsika - Dolph Ziggler vs John Cena tamin'ny lalao vy vy, tamin'ny hetsika lehibe niaraka tamin'i AJ Lee tany. '
Araraoty Big E amin'ny resadresaka ifanaovan'i Sportskeeda Wrestling amin'ity horonantsary eto ambany ity izay ifanakalozany hevitra maro karazana:
mihaona amin'olona ary mifankatia
Big E dia mety ho lasa tompon-daka eran-tany amin'ny WWE
Big E amin'izao fotoana izao dia mitazona ny vola ao amin'ny kitapom-bolan'ny Banky
Tao amin'ny WWE Money in the Bank dia niakatra tamim-pahombiazana i Big E mba hamoaka ny kitapom-bola ao amin'ny Banky, ary nahazo tifitra tamin'ny tompon-daka eran-tany nofidiny. I Bobby Lashley sy Roman Reigns no tompon-daka ambony indrindra amin'izao fotoana izao, saingy mety hiova tsy ho ela izany.
Fampisehoana ho an'ny taona.
Iza no mivoaka #SummerSlam Rahampitso alina miaraka amin'ny #UniversalTitle ? #TeamRoman #TeamCena @WWERomanRoyals @JohnCena @HeymanHustle pic.twitter.com/Pl53AEqDKd
- WWE (@WWE) 20 aogositra 2021
Roman Reigns dia vonona hiaro ny WWE Universal Championship manohitra an'i John Cena anio alina raha hiatrika ny WWE Hall of Famer Goldberg i Bobby Lashley. Ity takariva ity dia mety ho fotoana mety amin'i Big E vola amin'ny kitapom-bolany ao amin'ny kitapom-bolany momba izay tompon-daka amin'ny faran'ny alina.
karama isaky ny jery 2017
Heverinao ve fa handoa vola ao amin'ny kitapom-bolany i Big E anio alina ao amin'ny WWE SummerSlam? Mizarà ny hevitrao ao amin'ny fizarana hevitra etsy ambany.
lehilahy iray totohondry vs goku
manao ahoana ny endrik'i rey Mysio
ny fomba hanampiana tovovavy amin'ny fisarahana
inona no hatao rehefa tsy manana namana aho